Pebbles Peeji Na-eme njem N Njem | Kpọọ anyị na: 993.702.7574
Ekele gị site na Sand Pebbles Tour N Njem - onye njem njem Odisha nke na-emetụ mkpụrụ obi nke ọtụtụ ndị ahịa na nchịkọta magnet na ọrụ mgbakwunye. Akpụkpọ anụ Pebbles Na-agagharị N Na-agagharị na 1999 na Bhubaneswar - obodo mara mma nke a kwadoro dị ka ogige njem nleta na njem na-aga n'ihu na Odisha. Pebbles Peeji Na-agagharị Ọfịs Na-ejegharị ejegharị na-adị n'akụkụ dị jụụ ma nwee obi ụtọ dị mma.
Ụlọ ọrụ ahụ, n'ime afọ ndị a, edozila bọl na-agagharị dịka njem nleta na njem nlegharị anya site na ịjụ njem nlegharị anya dị iche iche na njem nlegharị anya nke na-ahazi Puri Special Tours, North East Tours, Boat Cruises, Weekend Getaways, Bhubaneswar Special Tours, Chọta Obere Amazon - Bhitarkanika, Odisha Spiritual Tour, Chilika na Odisha Golden Triangle, RathaYatra Special package, Buddhist Indian Gateway to Odisha, Enchanting Beaches of Odisha, Exclusive Odisha Tribal Tour, Sanctuaries of Odisha .... ikwu okwu ole na ole. E nwere ma nchịkọta njem ndị a na-eme tupu ha emee nakwa yana nhazi nlegharị anya a na-agụnye ọtụtụ ihe dị iche iche na-amasị ndị ahịa dịka Akwụkwọ Nsọ Odisha Tribal na Ụlọ Nsọ, Buddha Trail Odisha na Bhubaneswar - Puri - Konark - na ọtụtụ ihe ndị ọzọ ... ..
Sand Pebbles na-agbagharị agbagharị na ọtụtụ ọrụ mgbakwunye. Ụlọ ọrụ ahụ edepụtawo ihe niche dị na mpaghara nke Car mgbazinye ọrụ ma kwadebere ya n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị kachasị mma nke ụgbọala na ọkwọ ụgbọala nke oge a. Sand Pebbles na-ahapụ enweghị nkume ọ na-enweghị iji nye ndị ahịa ya obi ụtọ na ịkwakọba akpa ya na ihe niile dị na njem ndị njem. Ụlọ ọrụ ahụ agbatịwo alaka alaka ya na Puri, Gopalpur, Bhitarkanika, Delhi na Kolkata na mgbalị siri ike ọ na-eme iji ruo ndị ọzọ ahịa.
Sand Pebbles Na-eme njem N Na-eme njem na-aghọta nke Ministry of Tourism, Govt. nke India dị ka ụlọ ọrụ nyere ikike inye ndị nlegharị anya nlekọta njem nleta. OATA kwadoro ya. Ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime òtù ndị a ma ama dịka IATO, UFTAA, ITTA, ADTOI, TAAI, ATOAI, FHRAI na TAAO.
Sand Pebbles, onye ọsụ ụzọ nke na-eme njem nlegharị anya Odisha na-agba mbọ ịnye ndị ahịa ya ọrụ pụrụ iche na nke kachasị elu, na-agbanwe agbanwe na njem ndị njem. Nnukwu nlegharị anya na nlezianya nke ndị nlekọta na ndị ọkachamara nke Sand Pebbles na-eme na-eme ka ọ bụrụ nke na-adịgide adịgide, na-ebubata onyinyo nke ụlọ ọrụ ahụ ugboro ugboro. N'ihe gbasara mmepe ngwaahịa na nkwalite, ụlọ ọrụ ahụ ejirila ọtụtụ kilomita banye na njirimara ịzụ ahịa. Ndị otu ọkachamara ahụ na-atụgharị uche, nkà, ma tinye ya n'ọnọdụ ọrụ; ihe omuma ahia di iche iche na ihe ndi n'eme ndi mmadu obi uto. Ndị a dị iche iche na gburugburu ebe obibi, omenala, ime mmụọ, oge ntụrụndụ, anụ ọhịa, na MICE, si otú a na-eri nri na ọchịchọ dị iche iche.
Odisha na-eme ka ndị njem njem nleta na-adọrọ adọrọ na gburugburu ụwa. Sand Pebbles tour bụ na oké nke ihe kemgbe afọ iri na ọkara na-ejikwa ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị njem nleta na-enye ha ọmarịcha njem njem, enyemaka njem, na nkwado logistic. Usoro mgbasa ozi ọ bụla na-agbasawanye bụ nke gụnyere ihe omimi dị omimi, usoro mgbasa ozi, na ohere ọhụụ emeela ka ọnọdụ Sand Sandwich gaa njem dị oke dị ka onye isi nke azụmahịa njem na East India. Usoro nke akwadoro iji hụ na impeccable mma njikwa na ọrụ dị elu na-enye ọrụ na-adọrọ mmasị site n'ebe dị iche iche.
Sand Pebbles njem na-aga n'ihu na mmụọ na-enweghị mgbagha. Ịma mma nke East India na North East India dị na gị behest, dị nnọọ pịa na na na na na na n'elu ebe a na-enye site na Sand na Pebbles njem na otu ọkachamara na otu ihe pụrụ iche na-achọ ka mma na-eme ka e nwee ahụmahụ na-enye afọ ojuju.
Sand Pebbles tour nwere nkata dị egwu nke jupụtara na ngụkọta nke ihe mkpali dị mma nye gị. Bụrụ ya anụ ọhịa, mmasị pụrụ iche, nke ime mmụọ, onye njem ala, omenala na ihe nketa, oge ntụrụndụ, MICE .... enwere mmasị na kaadị ndị ahụ iji kpalite agụụ gị. Ebumnuche gị dị oke mkpa na Sand Pebbles tour - ma ọ bụ Free Independent Tour ma ọ bụ Ụlọ Ọrụ Na-agụnye Ndị Mmadụ ... anyị nwere ihe kacha mma maka gị.
Kemgbe ọtụtụ afọ, Sand Pebbles tour emeela ka ọnụnọ ya dị ka onye na-ahụ maka ndị na-ahụ maka ụgbọelu Odisha na ndị na-eweta ọrụ nkwụ ụgwọ.
Site na ya na-ntụpọ, ngwa ngwa, na nke a haziri ahazi Car na Coach Services na ọkpụkpọ oku - Sand Pebbles na-agagharị oge dị iche iche abụrụ dị ka aha ụlọ ma bụrụ ndị na-amasị ọtụtụ ndị bi na Odisha. Ndị agha a ma ama karịa ụlọ 60 ụgbọ elu ndị nwere ọnụ ala ndị gụnyere Mercedes Benz, Skoda Superb, Honda Civic, Toyota Corolla, Honda City, Toyota Innova, Tata Indigo, Mahindra Logan, Maorra Scorpio, Mahindra Bolero, Tata Indica , Tempo Traveler, Mini-Vans na nkuzi. Ndị nlekọta ahụ bụ ndị na-ahụ maka ndị ọrụ nlekọta na-ele ọbịa na-enye ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ. Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ na-azaghachi ndị ahịa site na ndị ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ ma na-agbagha ha mgbe niile na koodu omume. A na-enye ndị ọkwọ ụgbọala ekwe ntị ma nọgide na-akpọtụrụ ndị ọrụ.
Sand Pebbles na-eme njem nleta ndị ahịa na-etinyekwa karama mmiri ịnweta mmiri, akwụkwọ akụkọ Bekee, igbe ice, akwụkwọ anụ ahụ, igbe enyemaka mbụ na nche anwụ n'ime ụgbọ ala ya nile. Ugbo ala a nile nwere eriri oche na ihe nchekwa na ngwa ndi ozo. E nyere ndị ọrụ ụgbọ ala na onye nlekọta ọrụ 24X7.
N'ikwekọ na ọchịchọ dị oke mkpa maka ezumike nkwekorita ndị a na-eme ihe na-adịghị mma site na monotony na arụ ọrụ ọjọọ na-ejikọta ọnụ na ọgba aghara nke ndụ obodo, Sand Pebbles tour emeela ka nnukwu ihe onwunwe dị na Bhitarkanika National Park. A na-eme ka ebe nchekwa ebe obibi a na-atụgharị uche na gburugburu ebe obibi na 'Jungle Resort'. Bhitarkanika bụ ebe obibi nke oke ohia nke Mangrove nke ejiri mmiri ndị na-asọ oyi na ndị na-efe efe, nke dị na district Kendrapara nke Odisha. Otu n'ime umu ohia akuku akuku akuku nke India, Bhitarkanika bu ebe di iche iche na ugbo. A na-ahazi Sand Pebbles Jungle Resort iji kụziere ndị njem nleta ahụ ịdị n'otu na okike. Nke a emeela ka ọ bụrụ na 'ga-abụ ntụpọ' na njem nke ndị na-amụ nwa. Sand Pebbles njem emeela ihe na-enweghị ike ịbanye dịka onye na-azụ ahịa azụmahịa. A na-akpọ ahịa azụmahịa na ụlọ ọrụ dị ka 'ọdịnihu'. Sand Pebbles njem na-eme ka azụmahịa na ntụrụndụ dịkwuo nso. Odisha bụ njem na-adọrọ mmasị ma na-adọrọ adọrọ MICE na ịbanye ahịa MICE na-anụ ọkụ n'obi, Sand Pebbles tour akwadebewo ọtụtụ atụmatụ. Nkwekọrịta netwọk dị mma nwere ike ime ka Sand Pebbles na-eme njem iji nye ma ọ bụ gbochie ụlọ nkwari akụ, gbanyụọ ihe nkiri na-akpali akpali, ma kwado ntụrụndụ na ntụrụndụ maka ndị ọbịa. Ezi ọrụ nke Sand Pebbles njem ga-adọta achụmnta ego na-emekarị.
Sand Pebbles Ihe na-eme 'n' Entertainment Group, otu nke Sand Pebbles Njem 'n' Njem bụ ghọtara site India njem, Govt. nke India na Ngalaba Ofufe, Govt. nke Odisha. Akụkụ a dabeere n'isi obodo Odisha - Bhubaneswar. Nlekọta ihe omume na-ewere ọnọdụ dị ka ọrụ njem nlegharị anya. Enwere ihe n 'ihe omume' na Odisha. Sand Pebbles njem na-enwe obi ụtọ ịbụ onye ga-enwe ọganihu gala nke azụmahịa azụmahịa na steeti. Sand Pebbles njem na-eme ka elu ụlọ elu dị elu ya na ndị na-anụ ọkụ n'obi na ndị okike na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Ihe mgbaru ọsọ nke ụlọ ọrụ ahụ bụ inye ndị ahịa ya ezigbo ọrụ site na ilekwasị anya na atụmatụ bara uru, atụmatụ ndị ahịa.
Sand Pebbles njem na-ebipụta broshuọ nke ọma na nke zuru ezu na akwụkwọ nkwado ndị ọzọ nke na-egosi nnọọ ihe dị mma. Ihe nchịkọta mmasị ndị nwere mmasị na Sand Pebbles na-eme ka agbụrụ dị iche iche dị na Odisha. Ọ na-akwado ndị ọrụ nlegharị anya njem nlegharị anya na ohere na-enye ndị njem nleta ohere inwe mmekọ anya na omenala omenala nke ndị agbụrụ Odisha kwadoro. Mgbasa njem nlekọta nke ụlọ ọrụ ahụ na-ekpughe flavors pụrụ iche nke ụmụ amaala nke steeti; ememe ha na omenala ha. A na-enye ndị na-eme njem nleta ohere dị iche iche iji hụ ememme ha mara mma nke na-eme ememe ndị dị iche iche nke ndụ na-emetụta nchedo ọdịiche dị iche iche. Oghere Odisha bụ ebe dị ịrịba ama na map nke India maka inwe ọtụtụ ụdị obodo dị iche iche. Ọtụtụ ndị agbụrụ dị na districts nke Koraput, Rayagada, Naurangpur, Malkangiri, Kalahandi, Kandhamal, Baudh, Keonjhar, Sundargarh na Mayurbhanj. Ụgbọ mmiri Peeji nke Sand Pebbles gụnyere ebe niile a ma wepụ ihe ndị nwere mmasị na nlezianya nke obodo obodo. Maka ndị njem nleta na-akpali akpali, omenala Sand Pebbles na-enye nchịkọta nchịkọta. Ememme niile ahụ na-ahazi na ihe ndị na-ewu ewu nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị na-eme njem nleta na-enweta ohere ndụ zuru ụwa ọnụ iji mee ka ọdịda omenala nke Odisha na-aga n'oge oge oriri. Ebube na obi ụtọ nke nnukwu ememe omenala ndị dị ka Puri International Beach Festival, na Konark Festival na-enye ohere maka ndị njem nleta iji weghachite ebube ndị ọzọ.
Odisha nwere ọtụtụ ebe nkiri njem nleta. E wezụga ịma mma dị mma nke ebe ndị a na-eme njem nlegharị anya, ihe na-adọta ndị njem nleta bụ akụkọ ihe mere eme, okwu ọdịnala, ihe nnọchianya okpukpe, na ihe omimi. A na-eme mkpọtụ dị iche iche nke njem nlegharị anya na Sand Pebbles. Ụlọ ọrụ ahụ dị mkpa maka mmepe nke ọdịbendị omenala ndị dị na obodo ndị dị ka Raghurajpur. Ọ na-eme ka ndị njem nleta nwee mmetụta nke ịdị n'otu n'ebe obibi ndị obodo obodo si ebi ndụ ma na-eme ka ha nwee ume. Ndị njem na-achọkwu 'mmekọrịta' na 'ezigbo' kọntaktị na ụmụ amaala Odisha. Achịkọta nke Sand Pebbles tour na-hazie Odisha na ndị agbata obi dị ka Jharkhand, Madhya Pradesh, na Chhattisgarh na-agbanye obodo panorama ndị dị na mba ndị a na-egosi echiche ndị dị ka paddy n'ubi, ubi, na-ekiri ihe dị mma nke ugwu, ọtụtụ ụlọ na migratory nnụnụ, ememme, ndị na-ese akwụkwọ .... na ndepụta na-agwụcha.